Maalinta: 7-ka July, 2019
TMMOB: Shilalka Shirkadda Corlu, Waxaan Doonaynaa Inaan Cadaabisanno
Union of Chambers of Engineers iyo Architects (TMMOB) ayaa ku dhawaaqay sannad-guuradii koowaad ee ka soo wareegtay Qalinkii Cadaaladda ee Corlu. War saxaafadeedka ayaa yiri, "Waxaan xasuustaa kuwa waayay shilkii tababarka ee Chorlu sannadkii hore, waxaana dooneynaa kuwa masuulka ka ah in lagu ciqaabo sida ay u qalmaan". [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu, Altınordu Khudaarta iyo Xero Furux oo shaqo firfircoon ayaa laga qabtay. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Güler wuxuu yidhi, hal Intaanan xafiiska la wareegin, ganacsatadayadu waxay dib u cusbooneysiinayaan hadafka kulul ee hada jira. [More ...]
Adeegga Gaadiidka Gaadiidka ee Ordu helitaanka qadarin
Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu, oo dib u xaqiijisa maalgashiga fududeyn doona nolosha bulshada ee waayeelka iyo shakhsiyaadka naafada ah, ayaa lagu qaddariyo adeegga gaadiidkeeda wareega. Thanks to adeegga, muwaadiniinta curyaanka ah ee wata gaadiidka naafada waxay ku yaalliin bartamaha magaalada. [More ...]
Terminal Storey Junction wuxuu furan yahay
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu sheegay inay danaynayaan tayada iyo raaxada ee gaadiidka isla markaana ay sii wadaan maalgashigooda iyaga oo aan gaabin. Duqa Magaalada Büyükkılıç, waa mid ka mid ah maal gashiga gaadiidka Terminal Terminal Junction 15 bishii Luulyo [More ...]
Midowga Degmooyinka Marmara iyo Duqa Kocaeli Assoc. Dr. Tahir Büyükakın, degmada Gölcük, iyo wadada ugu weyn ee laga hirgaliyay gobolka waxay bilaabeen inay u adeegaan isgoyska weyn ee buundada. [More ...]
Gebze-Halkalı Dacwooyin badan oo ku saabsan khadka Marmaray ayaa yimid iyo Kuxigeenka CHP Kocaeli Ku-xigeenka Haydar Akar ayaa qaadey eedeymahan ajandaha Golaha. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha [More ...]
Dhaqdhaqaaqa 'Lean-Free' oo ku yaal Jasiiradda Ruushka
Mas'uuliyiin, cagaha lugta ee tareenka ayaa keeni kara dhaawacyo jireed iyo dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan, ayaa sheegay in isbeddel cusub uu ka bilowday saldhigyada metro ee magaalooyinka kala duwan ee Russia. Kuwa raacaya isbeddelladani, intooda badani waa haween, mareenka [More ...]
Shell Eco-marathon halkaas oo dhalinyarada 16-25 ee da’doodu u dhaxayso da'da dugsiga sare iyo jaamacadda ay la tartamaan baabuurta ay naqshadeeyeen oo ay soo saareen si ay ugu daboosho masaafada ugu dheer ee ay kujiraan tamarta ugu yar, 1 - 5 July [More ...]
Iyada oo la raacayo tilmaamaha Duqa Magaalada Zeynel Abidin Beyazgül, Dowladda Hoose ee Magaalada, oo xoojisay dadaalkeeda si ay u dhisto xNUMX kiiloomitir oo ka mid ah waddooyinka la taaban karo ee baadiyaha, ayaa leh [More ...]
Madaxweyne Zeynel Abidin Beyazgül, oo kormeer ku sameeyay wadada Karaköprü halkaasoo dilaac iyo qulqulo roob da’ay awgeed, 1 wuxuu biloowday bishii Abriil isagoo gacan ka helay asxaabteena farsamada, wuxuuna dhammeystiray nidaamka hindisaha berri. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Diyarbakir waxay kordhisay xakameynta cimilada ee gawaarida gadiidka dadweynaha ee u adeegaya bartamaha magaalada sababtuna tahay kuleylka cimilada oo ka sarreeya heerka xilliyeed. Dawlada Hoose ee Magaalada Diyarbakir, sababtuna tahay kuleylka cimilada ee ka sarreeya caadooyinka xilliyeed [More ...]
Xilliga Asduulka Ordu waa Bilaabaa Hore
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Güler wuxuu yidhi, sonrası Ka dib howlihii asphalt waxaan ku dhameysanay degmada Erikçeli ee degmada Kumru, asphalt wuxuu ka shaqeeyaa waddo xiriir toos ah la leh xaafada 7 ee degmada Kırlı Teknepınar Mevkii ee degmadii Khamiista. [More ...]
Maanta taariikhda: 7 July 1939 Port of Iskenderun
Maanta, 7 July 1939 3714 sharciga lambarkiisa ku saabsan wareejinta dekedda Iskenderun iyo line-ka Payas-Iskenderun ee maamulka Dawlada-State Railways.